KISS: Kurerutsa ndiyo kiyi yeRubudiriro Kurarama
Chishanu, February 5, 2010 Chipiri, April 1, 2014 Travis Smith
Artist uye illustrator Nick Dewar akashaya svondo rino. Aishandira makambani mazhinji akasiyana kubva The Atlantic Monthly kuRandom House, ichipa mifananidzo inonzwisisika kumazwi anonakidza mune chinyorwa kana bhuku. Basa randinofarira Nick Dewar rinoratidzira zvese hunyanzvi hwangu nehungwaru hwega:
Kusava nyore ndiyo kiyi yehupenyu hunobudirira.
Uku ndiko kuwedzera kwehunyanzvi uye kugona kutaura zvekare kwenguva yakaedzwa nzira yeKISS:
Kwete, kwete iyo KISS -
Iyo KISS musimboti -? Chengeta Icho Chakareruka, Kupusa.?
Uku ndiko kududzirwa kwese kwemazuva ano kweO Occam's Razor, iyo inoti? Masangano haafanire kuwedzerwa kupfuura zvinodikanwa ,? kana zvakanyanya kazhinji, 'zano rakareruka rinowanzo kuve rakanakisa.
Saka sei ndiri kukuudza izvi? Sei ndiri kudhonza 14th Century muzivi, Ace Frehley, uye achangofa muscotsman kublog? Nekuti mune yedu inokurumidza-kumhanya, hunyanzvi, inogara-pane nzanga, tinokanganwa nezvekuyedza kugadzirisa matambudziko nemhinduro dzakareruka. Kazhinji kazhinji munhu wese arikutsvaga tekinoroji nyowani kana nzira nyowani yekugadzirisa dambudziko apo patinogona kushandisa mhinduro dzakareruka dzinoda mutengo mushoma uye nekupa zvirinani kwenguva refu mabhenefiti.
Iyi uzivi inotaura nezve maficha ezvigadzirwa futi. Kungoti chigadzirwa chako chine zvimwe zvinhu hazvireve kuti zvichazadzisa zvido zvevatengi vako. Kana iwe usinganzwe chivimbo mukunzwisisa kwako kwevatengi vako? zvaunoda, une dambudziko hombe, rakakosha pane iro rekushandisa. Iwe unofanirwa kunzwisisa zvirinani vashandisi vako, vatengi vako, uye iwe pachako. Usangobata zviratidzo. Chengeta zviri nyore, uye tsvaga kuti chii chiri kunyatso kuitika. Uye rangarira -
Oo, uye zvakare rangarira kuti KISS inotapira zvakare!
Travis akazvarwa uye akakurira kunzvimbo iri kure inonzi Nebraska, uye mushure mekuenda kukoreji kuMissouri, akapedza degree rake reMBA neMasters eSocial Psychology kuBall State University. Travis anga ari zvinhu zvakawanda, zvinosanganisira cameraman, tutor, disc jockey, underwriting mushambadzi, barista, mutenderi mushanyi, raibhurari, sangweji muimbi, maneja wehofisi, muongorori, chidzidzo chekutsvaga, HR lackey, uye maneja weprojekiti, zvese izvo zvakamugadzirira yebasa reMushandisi Ruzivo Muongorori. PaTuitive, iye ari pamusoro pekutsvagisa kwevashandisi, kuyedza kwevashandisi, kuenzanisira kwevashandisi, kuunganidza zvinodiwa, nekuchengetedza munhu mune dhizaini yemunhu.
Anodiwa AT&T U-Verse